၀၀၈၆-၁၅၀ ၆၀၈၈ ၀၃၁၉ sales@xheatpress.com
ခွက်နှင့် Tumbler အပူဖိခြင်းများ
Teflon စာရွက်များနှင့် အပူတိပ်များ
Tape Dispenser ၊
Skinny Tumbler ကို အပြည့်အ၀ Sublimate လုပ်ဖို့ Mug Press ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ။
Sublimation Skinny Tumblers အတွက် Ultra Electric Tumbler အပူဖိစက်
အလိုအလျောက် Dual Platens Electric Heat Press Machine B2-2N Smart V3.0 ကို မိတ်ဆက်ခြင်း။
Mini Rosin-tech Heat Press (Model#HP230C-2X) အသုံးပြုသူလက်စွဲ
ဟိုက်ဒရောလစ် 5-10 တန် Rosin-နည်းပညာ အပူနှိပ် (မော်ဒယ် #HP3809-M) အသုံးပြုသူလက်စွဲ
တစ်ချက်ထိပြီး ခွက်နှိပ်နည်းဖြင့် Sublimation Mugs ပြုလုပ်နည်း
Cricut Mug Press ထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ အလိုအလျောက် အကောင်းစား One Touch Mug နှိပ်ပါ။
Semi-auto Cap Heat Press Transfer Printing Machine (Model# CP2815-2) LCD Controller လုပ်ဆောင်ချက်
ဦးထုပ်ကိုအပူပေးနည်း- လေ့လာရန် လိုအပ်သမျှ။
ဒီအဝတ်အစားတွေက သင့်အသွင်အပြင်ကို အရောင်အသွေးနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ဦးထုပ်ဆောင်းရတာကို လူတော်တော်များများက နှစ်သက်ကြပါတယ်။ နေရောင်အောက်မှာ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ ဦးထုပ်က ဦးရေပြားနဲ့ မျက်နှာကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တာနဲ့ အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဦးထုပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေပါက ထုပ်လုပ်သင့်သည်...
Manual Heat Press vs Air Press vs အလိုအလျောက် အပူနှိပ်စက်များ
၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် စက်အမျိုးအစားမည်မျှရှိသနည်း အပါအဝင် အပူဖိခြင်း၏ ကွဲပြားသော ရှုထောင့်အားလုံးကို သင် အလွန်ရင်းနှီးနေပြီဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ swinger heat press, clamshell press, sublimation heat press နှင့် drawer heat press တို့၏ ခြားနားချက်ကို သင်သိသော်လည်း၊
ယနေ့ခေတ်တွင် ရရှိနိုင်သော အပူဖိအား၏ အဓိက အမျိုးအစားများမှာ အဘယ်နည်း။
မသိပါက၊ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် တတ်နိုင်သော အပူပေးစက်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ဈေးကွက်တွင် ယှဉ်ပြိုင်နေသည့် အမှတ်တံဆိပ်များစွာရှိသော်လည်း သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ရေပန်းအစားဆုံး အမျိုးအစားအချို့ကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဤပုံနှိပ်စာအမျိုးအစားလေးမျိုးသည် ခေတ်ဆန်လာကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်...
အသေးစားလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုမှုအတွက် အပူပေးစက်လေးခုကို အကြံပြုပါ။
အကယ်၍ သင်သည် သင့်ဖောက်သည်များ အတွက် အထွက်တိုးရန်နှင့် သင့်ဖောက်သည်များအတွက် ပထမအဆင့် ထုတ်ကုန်များ ဖန်တီးရန် စီးပွားဖြစ် အပူဖိနှိပ်မှု လိုအပ်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တစ်ဦးဖြစ်ပါက သို့မဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင် အသုံးပြုရန်အတွက် အသေးစား လက်မှုတ်အပူနှိပ်ခြင်းကို ရှာဖွေနေသည့် စတင်သူ သို့မဟုတ် ဝါသနာပါသူတစ်ဦးဖြစ်ပါက၊ အောက်မှာ မင်းကို ဖုံးထားလိုက်ပြီ! ဤအပူပေးစက်တွင်...
© မူပိုင်ခွင့် - 2010-2021- All Rights Reserved. အသားပေးကုန်ပစ္စည်းများ - ပူ Tags: - Sitemap.xml - amp မိုဘိုင်း
အပူစာနယ်ဇင်းကလောင်ပရင်တာ , Ball ကိုကလောင်အပူစာနယ်ဇင်းစက် , အပူစာနယ်ဇင်းများအတွက်ခြံ , အပူစာနယ်ဇင်း Labels: , Ball ကိုအပူစာနယ်ဇင်းစက် , အသေးစားတံဆိပ်အပူစာနယ်ဇင်းစက် ,
၀၀၈၆-၁၅၀ ၆၀၈၈ ၀၃၁၉